Zlatan Ibrahimović Oo Manchester united Guul Daro ka BadBaadiyay & Red Devils Oo Markii 9-aad Bar Baro Gashay | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Zlatan Ibrahimović Oo Manchester united Guul Daro ka BadBaadiyay & Red Devils Oo Markii 9-aad Bar Baro Gashay
Zlatan Ibrahimović Oo Manchester united Guul Daro ka BadBaadiyay & Red Devils Oo Markii 9-aad Bar Baro Gashay	Waxaa Qoray: Abdirashid Mohamud Nor "SHarDinHO" Taariikh: 5-April-2017
SHIHIHII LABADA KOOXOOD EE KULANKAN:
Kaydka: Romero, Fosu-Mensah, Shaw, Darmian, Pogba, Mkhitaryan, Martial.
DAQIIQADII 22 AAD GOOOOOOOOOOOOOL!! Everton ayaa si lama filaan ah hogaanka ciyaarta kula wareegtay kadib markii uu difaaca dhexe ee Phil Jagielka uu si fiican u garaacay Marcos Rojo iyo David De Gea si uu Ronald Koeman iyo kooxdiisa Toffees u siiyo kalsooni ay Man United kula ciyaari karto wuxuuna Phil Jagielka dhaliyay goolka xaalada ku sii xumeeyay Man United waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Everton neefta ugu celisay jamaahiirta Old Traffrod.
Si la mid ah qaabkii ay Manchester United xili ciyaareedkan oo dhan ay kulamada Old Traffrod ugu soo dhibtoonaysay ayay markale kooxda Mourinho garan wayday qaabkii garoonkeeda goolal loogu dhalinayay iyada oo Everton si adag u difaacanaysay goolka ay hogaanka ciyaarta ku haysay. Nasiib darada Man United ayay ka mid ahayd in birta goolka Old Traffrod ay markale ka soo hojeedsatay iyada oo Herrera uu birta ku garaacay fursad gool u muuqatay.
Manchester United ayaa sidii la filayay inta ugu badan kubbad haysashada ugu badan lahayd laakiin waxaa dhibaato markale ku hayad sidii ay fursadaheeda ugu faa’iidayn lahayd. Mourinho iyo jamaahiirta Red Devils ayaa markale ka niyadjabsanaa sida bilaa ilkaha ah ee weerarka Man United ay qaybtii hore ee kulankan ay ahaayeen.
Everton ayaa weeraro deg deg ah fursado ku abuuraysay iyada oo Lukaku uu sal u ahaa weerarada ay Everton ku raadinaysay goolka laabad ee ay Man United ku sii niyad jabin lahayd. Laakiin wax kasta oo ay Man United samaysay waxay qaybtii hore ee kulankan awoodi wayday in ay la timaado goolka barbaraha waxaana lagu kala nastay 1:0 ay Everton hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayuu Mourinho shaxdiisa isbadal ku soo sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Daley Blind wuxuuna ciyaarta soo galiyay Paul Pogba oo ka soo kabsaday dhaawac uu la maqnaa waxayna Man United awoodeeda oo dhan iskugu gaysay sidii ay ugu horayn ula iman lahayd goolka barbaraha si ay ciyaarta ugu soo laabto.
Manchester United ayaa duufaano weeraro ah ku raadinaysay goolka barbaraha laakiin difaacashada Everton ayaa ahayd mid fantastik ah waxayna Man United ka joojinayeen fursado aan tiro lahayn. Nasiib darada Manchester United ayaa halkeeda ka sii socotay waxayna markale birta goolka Old Trafford mucaaraday Paul Pobga kaas oo gool madax ah ugu dhawaaday in uu dhaliyo.
Laakiin Lukaku ayaa nooc kasta oo dhibaato ah ku abuurayay difaaca Manchester United markasta oo uu kubbada helo waxaana jiray fursad cajiib ah oo uu ku abuuray goolka United balse shaqo fiican oo uu qabtay Eric Bailly ayaa marar badan Lukaku u diiday in uu xaalada ku sii xumeeyo United.
DAQIIQADII 65 AAD Mourinho ayaa kursiga kayka qaban waayay wuxuuna go’aansaday in uu shaxdiisa ku sameeyo labada badal ee u hadhsanaa oo isku mar ah wuxuuna ciyaarta ka saaray Michael Carrick oo uu ku soo badalay Henrikh Mkhitaryan oo kaydka ka soo baxay halka Ashley Young uu saaray wuxuuna fursad siiyay Luke Shaw.
DAQIIQADII 70 AAD Gooooo? Man United ayaa ugu danbayn u muuqatay in ay la timid goolka inkaarta ku noqtay ee barbaraha kadib markii uu Ibrahimovic shabaqa soo taabtay laakiin calanwadaha ayaa markiiba tilmaamay in uu xidiga ree Sweden offside ku jiray waxaana sii socotay in Man United ay wali raadiso goolka barbaraha.
Man United ayaa waqtiga la baratamaysay laakiin waxay wali waxay garan wayday qaabkii garoonkeeda gool loogu dhalinayay waxayna markasta Everton ku sii dhawaanaysay guul ayna markii hore filayn balse Mourinho iyo kooxdiisa ayaa wax kasta ku bixinaysay sidii ay ugu yaraan ku heli lahayd hal dhibic ee ay barbaraha u keensan lahayd.
Waqtigii rasmiga ahaa ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Everton hogaanka ku hayso wuxuuna garsooraha afraad ee kursiga kaydka Old Traffrod fadhiyay tilmaamay in 4 daqiiqo oo dheeraad ah ciyaarta la sii ciyaari doono. Waxayna ahaayeen afar daqiiqo oo Everton ku badan balse Man United aad ugu yar.
DAQIIQADII 90+3 KAADHKA CAS + REKOODHE!! Ugu danbayn Manchester United ayaa heshay fursadii ugu fiicnayd ee ay ugu yaraan guuldaro kaga badbaadi lahayd kadib markii Ashley Williams kaadhka cas lagu siiyay in uu darbo uu Luka Shaw uu goolka Everton gacanta ku celiyay waxaana Man United loo dhigay rekoodhe kaas oo ahaa fursadii ugu danbaysay ee ay ciyaarta ku barbarayn kartay. Ashley Williams ayaa loo taagay kaadhka cas oo toos ah.
DAQIIQADII 90+4 AAD GOOOOOOOOOOL!! Zlatan Ibrahimović ayaa si degan kooxdiisa ugu dhaliyay goolka ay ciyaarta oo dhan soo waayeen kadib markii uu si fiican u garaacay goolhaye Robles laakiin waxay ahayd bartilmaameedkii ugu horeeyay ee uu Ibrahimovic kulankan ka sameeyay wuxuuna goolkan dhaliyay iyada oo ciyaartu ay tahay dhamaad oo ay ilbidhiqsiyo ka hadhsan yihiin.
Ugu yaraan Zlatan Ibrahimović ayaa goolkiisii 27 aad ee xili ciyaareedkan Manchester United kaga badbaadiyay guuldaro xanuun badan inkasta oo barbaraha ay gashay aanu ahayn mid guuldaro ka wax ku dhaama. Man United ayaa gashay barbarihii 12 aad ee xili ciyaareedkan waana markii ugu horaysay taariikhdeeda oo ay 12 kulan oo Premier Leaque-ga ay babraro gasho kadib marka 29 kulan la ciyaaray.
Rajadii Manchester United ay ka qabtay in ay afarta kaalmood ee sare ku dhamaysato ayay markale jug wayni sii gaadhay iyada oo 29 kulan ka heshay 54 dhibcood waxayna markan u muuqataa in ay ku sii adkaanayso in ay afarta kaalmood ku dhamaysan karto iyada oo barbarihii 9 aad ku gashay Old Traffrod.